नागरिक अधिकारका लागि सिंह मानिने अमेरिकी सांसद लेविसको निधन ! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > विश्व समाचार > नागरिक अधिकारका लागि सिंह मानिने अमेरिकी सांसद लेविसको निधन !
नागरिक अधिकारका लागि सिंह मानिने अमेरिकी सांसद लेविसको निधन !
July 19, 2020 July 19, 2020 News Desk136
अट्लान्टा । अमेरिकामा नागरिक अधिकारका लागि सिंह मानिने सांसद जोन लेविसको निधन भएको छ । नागरिक अधिकारको लडाइँका लागि अमेरिकामा अनुकरणीय, प्रशंसनीय र उच्च आदरणीय व्यक्तिको रुपमा चिनिने लेविसको ८० वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
उहाँको गत शुक्रबार निधन भएको अमेरिकाका सभामुख नान्सी पेलोसीले पुष्टि गर्नुभएको जनाइएको छ । सभामुख पेलोसीले स्वर्गीय लेविसलाई नागरिक अधिकारका लागि लडेको असाधारण व्यक्तिको रुपमा स्मरण गर्नुभएको छ ।
उहाँप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै सभामुख पेलोसीले उहाँलाई राष्ट्रले सधैँ सम्झिरहने र आदर गरिरहने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । शुक्रबार राति उहाँले शोक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै आफ्नो अति नै आदरणीय र प्रिय व्यक्तिलाई गुमाउनु पर्दा दुःख लागेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँलाई गत सन् २०१९ को डिसेम्बर महिनामा पाचन ग्रन्थीमा क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो । उहाँको उपचारकै क्रममा निधन भएको हो । उहाँको सन् १९४० मा अलाबामा भन्ने ठाउँमा सामान्य किसान परिवारमा जन्म भएको थियो । रासस / एपि
विदेशमा कोरोनाबाट १६० नेपालीको मृत्यु !
आज बिपि जयन्ती: कांगेस बिपि चिन्तन छाडेर श्राद्द गर्दैछ !
May 24, 2020 Raju Thapa